Shenzhen Anbotek Compliance Laboratory Limited (Yakapfupikiswa seAnbotek, Stock kodhi 837435) yakazara, yakazvimirira, ine chiremera chechitatu-bato rekuyedza muviri nemambure ebasa munyika yese. Sevhisi yezvigadzirwa zvikamu zvinosanganisira Internet yezvinhu, 5G / 4G / 3G zvigadzirwa zvekutaurirana, mota dzakangwara uye zvinhu zvadzo, simba nyowani, zvinhu zvitsva, muchadenga, njanji yekufambisa, dziviriro yenyika uye indasitiri yemauto, huchenjeri hwekugadzira, nharaunda yezvakatipoteredza uye nezvimwe. zvehunyanzvi masevhisi uye mhinduro dzekuyedza, kuisirwa chitupa, kugadzirisa dambudziko, kutsvagisa kwakajairika uye kusimudzira, uye kuvaka kwema laboratori kumatunhu, vatengi vechigadzirwa, vatengi vekunze uye vanopa muganho e-commerce vanopa. SeShenzhen guta kuyedza uye kubvumidza yeruzhinji tekinoroji yebasa chikuva cheNew Energy, Kuvhenekesa Simba Kubudirira, Mugadziri, Kunze Kwekutengesa, Zvigadzirwa zvemagetsi neInternet yezvinhu. Anbotek akakunda kuvimba kwevanopfuura makumi maviri emakambani emakambani ane mhando yepamusoro masevhisi kwemakore gumi nemashanu. Muna 2016, Anbotek akabudirira kunyorwa paNational Equalities uye Exchange Quotations (Yakapfupikiswa seNEQ) uye yaive yekutanga nzwisisiro yekuyedza Shenzhen kunyora pane NEEQ.
Anbotek yakave yakagamuchirwa neCNAS, CMA uye NVLAP - lab kodhi 600178-0）, inozivikanwa neCPSC, FCC, UL, TUV-SUD, TUV Rheinland CBTL, KTC uye mamwe akakurumbira epasi rese masangano nemasangano. Anbotek iCCC uye CQC yakasarudzwa murabhoritari. Mishumo yekuyedza uye zvitupa zvinozivikanwa nenyika dzinopfuura zana nenzvimbo dzinosanganisira USA, UK neGerman uye nezvimwe Anbotek ane hunyanzvi hwekupa data risingasaruri. Mhedzisiro yekuyedza uye mishumo inozivikanwa pasi rese.
Inowedzera huwandu hwevatengi
Base uye rabhoritari
Subsidiaries uye zvitoro
Vashandi veAnbotek vanotsigira kuvimbika uye vanoona kutendeseka sehunhu hwekutanga. Vashandi veAnbotek vakazvipira kupa sainzi uye nechokwadi data uye mishumo.
Vashandi veAnbotek vane chinangwa chimwe chete, chiito chisingachinji, uye kutsigirana.Vashandi veAnbotek vachashanda pamwechete kuzadzisa chinangwa.
Vashandi veAnbotek vakazvipira kuumba kukosha uye kugadzirisa nyowani tekinoroji mhinduro dzemusika kudiwa. Anbotek iri kutungamira kumberi kwekuvandudza tekinoroji uye kuchengetedza hutungamiriri hwehunyanzvi.
Vashandi veAnbotek vanoteerera kune izvo zvinodiwa nevashandi, bata mumwe nemumwe nemumwe nekuvimbika, uye vanhu veAmbo vanotarisa pane zvinodiwa nevatengi uye vanoshandira vatengi nehunyanzvi hwehunyanzvi.
Vanhu veAnbotek vakazvipira kuvaka sangano rinodzidza uye kuzvivandudza. Vanhu veAnbotek vanokura pamwechete nevatengi uye mabhizinesi kuti vaone kuzvikoshesa.
Anbotek · Chiono
Iva anoremekedzwa kwazvo mutungamiri muChina yemuno yekuyedza uye indasitiri yekuzivisa
Nehunyanzvi gadzirisa dambudziko reChinese chigadzirwa certification kutenderera
Gadzira kukosha kwevatengi uye gadzira kubwinya nevashandi
Anbotek · Mishoni
Kuti uchengetedze hutano hwevanhu uye kuchengetedzeka, kuchengetedzwa kwezvakatipoteredza, kuchengetedza simba uye sevhisi
Ipa imwe-yekumira sevhisi kune vatengi muminda yekutarisa, kuzivikanwa, kuyedza uye chitupa
Shenzhen Satellite TV Station "SPOT NEWS" yakaparadzira chirongwa ichi "firimu renhare mbozha"
Meya nevamwe vatungamiriri veChangsha Guta vakashanyira Hunan Anbotek.
• Iyo Nanfang Mazuva ese yakaburitsa yakakosha chinyorwa pa "Anbotek Zvakasimba maseva ehunhu hweShenzhen yakasarudzika hupfumi zone".
• Anbotek akapfuudza US NVLAP (kubvumidzwa kweFCC) pasite assessement zvakare.
• Anobek akahwina zita rekuremekedza re6th Shenzhen Famous Brand.
Yakave China Hunhu Certification Center CQC Contracting Laboratory.
• Inokudzwa neShenzhen Science uye Technology Innovation Committee technical Service Innovation Platform.
• Inokudzwa neShenzhen Science uye Technology Commission Nyowani Energy Vehicle Power System Kuyedza Paruzhinji Technology Service Platform.
Hunan Anbotek yakagadzwa ikaiswa mukushanda kunoshanda, uye Anbotek akatanga kupinda mumunda wekuyedzwa kwezvakatipoteredza.
• Anbotek technical services akanyoreswa uye akavhura chitsauko chitsva muchikamu chebasa reAnbotek.
Won "China inovimbwa zvikuru yechitatu-bato kuyedza sangano" neChina Electronics Quality Management Association.
• Anbotek Shenzhen akakunda rukudzo rwemabhizimusi epamusoro-soro emunyika.
• Makambani epasi-eboka-Zhongjian michina kambani akahwina rukudzo rwenyika yepamusorosoro bhizinesi.
• Yakabudirira kunyorwa paNational Equities Exchange uye Quotation (NEEQ), kodhi yemasheya: 837435.
• Akapihwa Wakanakisisa Partner wegore muSouth China Dunhu reTUV SUD Boka kwemakore manomwe akateedzana.
• Shenzhen Science uye Technology Innovation Committee Mugadziri Service Platform Rukudzo.
• Kubatanidzwa uye kuwanikwa kweZhongjian kambani yemidziyo, zvigadzirwa zvigadzirwa zvinosanganisira chivimbo chekuchengetedza michina R & D uye kugadzira.
Yakave nehunyanzvi hweCCC rabhoritari inotungamirwa neNational Certification uye Accreditation Administration.
• Akagamuchira rukudzo rwemumwe mudiwa kubva kuKTC Korea.
• Akagamuchira rukudzo rweShenzhen Ehupfumi uye Yekutengesa Commission Kunze Kwekunze Service Platform.
• Nyowani Simba Bhatiri Kuyedzwa uye Certification Innovation Service Platform yakaziviswa neShenzhen Science uye Technology Innovation Committee Science uye Technology Service.Mapurojekiti matsva ekutaura kwevanhu.
Yakasimbiswa Dongguan Anbotek.
• Won kukudzwa kwenyika yepamusorosoro bhizinesi.
• Mwenje yemwenje zvigadzirwa zvine simba kushanda uye kupenya kuita paruzhinji tekinoroji yebasa chikuva yakahwina rukudzo rwekuvandudza sangano neNanshan District Science uye Technology Bureau.
• Guangzhou Anbotek yakanyoreswa uye yakasimbiswa.
• Ningbo Anbotek yakanyoreswa uye yakasimbiswa.
• Inokudzwa nebazi reSainzi neTekinoroji's SME Technology Innovation Fund.
• rakanakisa wepagore mudiwa kukudzwa kweTUV SUD Boka reSouth China.
Kuongorora zvigadzirwa zvemagetsi uye kupihwa chitupa chebasa reruzhinji kwakakunda rukudzo rweSME Technology Innovation Fund ye Ministry of Science and Technology.
Yakawana mvumo yesangano reKTC muKorea, uye huwandu hwebhizinesi reKC hunotanga kutanga muindasitiri.
• Anbotek Pengcheng akanyoreswa uye akasimbiswa muSenzhen Baoan District.
Yakatanga kupihwa chibvumirano neCNAS (Chitupa Nha.: L3503) uye yaive yekutanga rabhoritari yekuzvitambira.
Musi waMay 27, 2004, muvambi wekambani, VaZhu Wei, vakatanga Anbotek Testing muSenzhen Nanshan Science and Technology Park.